Waraysi-Nabadoon Yaasiin C.samad oo kahadlay soo xulista golaha deegaanka Galkacyo. – Radio Daljir
Luulyo 9, 2016 2:06 b 0
(July 09 2016)-Magaalada Galkacyo waxaa ka socota xulidda xildhibaannada golaha deegaanka ee Galkacyo, kadib markii maalmo ka hor madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu kala diray golihii hore ee deegaanka, oo uu ka mid ahaa maamulkii degmada Galkacyo.
Xildhibaannada haatan la soo xulayo ayaa u muuqda kuwo shuruudaha aqoontooda ama waayo aragnimadoodu ka duwan tahay kuwii hore marka loo fiiriyo soo jeedinta dawladda.
Nabaddoon Yaasiin Cabdisamad oo ka mid ah nabadoonnada magaalada gobolka, kana mid ah dadka ku lugta leh soosoocdaminta golaha cusub ayaa Radio Daljir uga warramay illaa hadda meesha xuliddaasi marayso, xildhibaannada deegaan ee loo baahanyahay.
DHEGEYSO-Agaasime Tigaana oo beeniyey in Soomaaliland sanaadiiq keentay Sanaag.